အမေရိကန်၏ တစ်ပတ်ရစ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချမှုထောင်ချောက်က အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများကို ထိတ်လန့်စေ - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ စူးလူးပြည်နယ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်လေတပ်ပိုင် C-130 Hercules သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ် ပျက်ကျသောနေရာအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မနီလာ၊ မေ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယခင်သီတင်းပတ်က ပြီးဆုံးခဲ့သော အမေရိကန်-အာဆီယံ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေရန် ကတိပြုခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ Lop Buri ပြည်နယ်တွင် F-5 စစ်လေယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းများအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့ရှိ Halim Perdanakusuma လေဆိပ်တွင် F-16 တိုက်လေယာဉ် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ အင်ဒိုနီးရှားလေတပ်တာဝန်ရှိသူများရောက်ရှိလာသည်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အသစ်သည် ရိုးသားမှုကင်းမဲ့ပြီး မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများထံ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် တစ်ပတ်ရစ်လက်နက်များ ရောင်းချမှု ပမာဏကြီးမားလာသည့် အမေရိကန်၏ အမည်ခံ လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် လှုပ်ရှားလာဖွယ်ဖြစ်သည်။
တစ်ပတ်ရစ်လက်နက်အချို့ကြောင့် ရံဖန်ရံခါဖြစ်ပေါ်လာသော ကံမကောင်းအကြောင်းမလှမှုများအဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ လေ့လာဆန်းစစ်သူများက စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုံးပစ္စည်းကိရိယာရောင်းချသူ တစ်ဦးတည်းအပေါ် အလွန်အကျွံမှီခိုနေရခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် မေတ္တာရပ်ခံလျက် ထိုကဲ့သို့ဝယ်ယူခြင်းသည် “တန်ဖိုးကြီးမားသော ထောင်ချောက်” ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးလျက်ရှိသည်။
အဆိုးဝါးဆုံး မတော်တဆမှုမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင် လေတပ် (PAF) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း စူးလူးပြည်နယ်တွင် ဆင်းသက်ရာ၌ ပျက်ကျခဲ့ကာ လူ ၅၃ ဦးသေဆုံးပြီး ၅၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန် Lockheed လုပ်ငန်းက ထုတ်လုပ်ထားပြီး သက်တမ်း ၃၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် တစ်ပတ်ရစ် C-130 Hercules လေယာဉ်ပျက်ကျမှုသည် လူသေဆုံးမှုအများဆုံး PAF လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာစာချုပ်များအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
ဒေသတွင်းမီဒီယာ၏ အဆိုအရ C-130 Hercules NR 5125 လေယာဉ်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး စတင်ပျံသန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင် PAF သို့ ရောင်းချလွှဲပြောင်းခြင်းမတိုင်မီ ၎င်းလေယာဉ်အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်က လေယာဉ်ထိန်းသိမ်းရုံထဲ မထည့်မီအချိန်ထိ အမေရိကန်လေတပ်၌ အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် အမေရိကန်နိုင်ငံက အဆိုပါလေယာဉ်အား “လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အကူအညီ” အဖြစ် ယင်းနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လွှဲပြောင်းခြင်းအခမ်းအနားဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံထံ တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေဖြင့် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် ပီဆို ၂.၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀.၈၉ သန်းခန့်) အနက် ပီဆို ၁.၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂.၅၇ သန်းခန့်) ကိုသာ ပေးချေခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်ငွေကို ဆိုင်းထားရန်အတွက် အမေရိကန်ဘက်က သဘောတူထားကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Delfin Lorenzana က အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှား အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများစွာကလည်း အလားတူ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှစ၍ အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ်နှင့်အတူ စက်ကိရိယာတပ်ဆင်မှုများ စတင်ခဲ့သည်။ ထိုင်းဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်ဝေသော Matichon သတင်းစာအရ အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် F-16 ဂျက်လေယာဉ် ၅ စင်းမှာ လွန်ခဲ့သော ၁၂ နှစ်အတွင်း ပျက်ကျခဲ့ကာ ထိုင်းလေယာဉ်မှူး ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မတ်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင်လည်း F-16 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်းလေယာဉ်သည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအကြာက ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်သို့ ရောင်းချလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုမီ အမေရိကန် လေတပ်တွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်လည်း F-16 ဂျက်လေယာဉ်တစ်စင်းမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးလေ့ကျင့်နေစဉ် ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လေယာဉ်မှူး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ စစ်တပ်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ ယင်းမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ သက်တမ်းလွန်နေသော အင်ဂျင်များကြောင့်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန်၏ တန်ဖိုးကြီးမားသော ထောင်ချောက်
အမှန်တကယ်တွင်မူ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသည် အဆိုပါ တစ်ပတ်ရစ်လက်နက်များအပေါ် ငွေကြေးအမြောက်အများ သုံးစွဲထားမိခြင်းဖြစ်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှ၏ အကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်သော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် တစ်ပတ်ရစ် F-16 ဂျက်လေယာဉ် ၂၄ စင်းကို ဒေါ်လာ သန်း ၇၅၀ ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အမေရိကန်၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတစ်ပတ်ရစ် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမှုကလည်း အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွက် နောက်ထပ်ခေါင်းကိုက်စရာ ကိစ္စဖြစ်ပေသည်။
တရားဝင်အချက်အလက်များအရ ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရသည် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း F-5 တိုက်လေယာဉ် လေးစင်းအား အဆင့်မြင့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိရိယာများ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဘတ် ၃၂၆ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉.၄၅ သန်းခန့်) သုံးစွဲခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းလေတပ်အနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည့် သက်တမ်းရင့်လေယာဉ်များ၏ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမှုကို ခေါင်းခဲနေရကြောင်း ထိုင်းလေတပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Prapas Sornchaidee က ပြောခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အထွေထွေအတွင်းဝန်၊ ဒုတိယ လေတပ်အဆင့်မြင့်အရာရှိ Donny Ermawan Taufanto ကလည်း ဆယ်စုနှစ်ကြာ သက်တမ်းရှိနေသော အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် F-16 ဂျက်လေယာဉ်များအပေါ် အလွန်အမင်း အမှီပြုနေရကြောင်း၊ သက်တမ်းရင့် လေယာဉ်များသည် အပိုပစ္စည်းများနှင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ အကန့်အသတ်ရှိနေသည့်အပြင် လုံခြုံစိတ်ချမှု အခက်အခဲများက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွက် ပြဿနာများရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများက ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ အမေရိကန်မှ တစ်ပတ်ရစ် တိုက်လေယာဉ်များ ဝယ်ယူခြင်းသည် အင်ဒိုနီးရှားအတွက် အမှန်တကယ်ပင် အသိပညာမကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ အင်ဒိုနီးရှား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်သူ တစ်ဦးက ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသော မညီမျှမှု
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းအန္တရာယ်များသည် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသော မညီမျှမှုသဘောတရားကို ၎င်းတို့အား သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာဆန်းစစ်သူများက ဆိုသည်။
The Philippine Star အင်္ဂလိပ်နေ့စဉ်သတင်းစာ၏ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် Wilson Lee Flores က အမေရိကန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား “ကိုလိုနီခေတ်အကြွင်းအကျန်” အဖြစ် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
“ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေထက် အမေရိကန်ရဲ့ မဟာဗျူဟာ၊ စစ်တပ်နဲ့ အခြားအကျိုးစီးပွားတွေကို ပိုမိုဦးစားပေးထားတဲ့ ကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နိုင်ငံနဲ့ အရင်ကကိုလိုနီပြုသူရဲ့ကြားက အင်မတန်မညီမျှတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် နှစ်နိုင်ငံ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” Flores က ပြောခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒသုတေသနဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်အင်စတီကျု ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပါမောက္ခ Rommel Banlaoi က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစနစ်ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပိုလျှံစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို ဆက်လက်လက်ခံရန်မှလွဲ၍ ရွေးချယ်စရာမရှိကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစက်ကိရိယာများ၏ အထူးသီးသန့်ဖြစ်ကာ သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းကြောင့် အစားထိုးပစ္စည်းများ ရှာဖွေရန် ပိုမိုခက်ခဲကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ စစ်တပ်များကို အမေရိကန်က ထိန်းချုပ်ရန် ကုတ်အားရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးကောလိပ်၊ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Surasit Thanadtang က ၎င်းတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် တစ်ပတ်ရစ်လေယာဉ်များကို ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ၎င်းလေယာဉ်များကို အဆင့်မြှင့်တင်လိုပါက အမေရိကန်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနေရကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့က အမေရိကန်ဆီကနေ လေယာဉ်ငှားရမ်းသုံးစွဲနေရသလိုဖြစ်တာပေါ့” ဟု Surasit က ဆိုသည်။
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ အပါအဝင် ထိုင်းလေတပ်စနစ်တစ်ခုလုံးသည် အမေရိကန် ပုံစံနှင့် နည်းပညာမှ အရင်းခံလာခဲ့ချိန်မှစ၍ အခြားနိုင်ငံများမှ ကိရိယာအသစ်များရရှိရေးက အမေရိကန်စနစ်များနှင့် ချိန်ညှိရန် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ဒါဟာ ပင်မကုတ်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဟာ သူ့ရဲ့ စနစ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ အခြားကိရိယာအသစ်အတွက် ပင်မကုတ်ကို မျှဝေရာမှာ အင်မတန်ဉာဏ်များထားပါတယ်။ အမေရိကန်အနေနဲ့ နိုင်ငံများစွာကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ သူ့ရဲ့ အားကောင်းတဲ့စနစ်တွေကြောင့်ပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများစွာသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာရောင်းချသူတစ်ဦးတည်းအပေါ် အလွန်အမင်းအမှီပြုထားခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ပြင်သစ်ထံမှ Rafale တိုက်လေယာဉ် ၄၂ စင်း ဝယ်ယူရေးသဘောတူစာချုပ်ကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်ဝေသော Jakarta Post နေ့စဉ်သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာအာဘော်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအပေါ် အလွန်အမင်း မှီခိုအားထားနေခြင်းဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် လက်နက်ကန့်သတ်မှုများနှင့် လက်နက်ကုန်သွယ်ရေး ပိတ်ပင်မှုများအတွက် ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ (Xinhua)
MANILA, May 20 (Xinhua) — In the U.S.-ASEAN Special Summit concluded last week, U.S. President Joe Biden pledged to strengthen security cooperation with Southeast Asian countries.
Washington’s new pronouncement seems to lack sincerity and actions as America’s so-called security cooperation has takenaheavy toll on Southeast Asian countries in recent years, especially with its sale of U.S.-made second-hand weapons.
As tragedies caused by some second-hand weapons happen from time to time, analysts from the Southeast Asian countries have warned the “costly trap” in such procurement, appealing for avoiding over-dependence onasingle military equipment supplier.
The crash of the 33-year-old second-hand C-130 Hercules built by the U.S. firm Lockheed was the deadliest PAF plane crash that concerns the country’s procurement contracts with U.S. companies in past decades.
Right after that, the United States officially handed over the plane asa“security cooperation assistance” to the Philippines atahandover ceremony in February of that year.
At the ceremony, Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana said that the Philippines only paid 1.6 billion pesos (roughly 32.57 million U.S. dollars) out of the total cost of 2.5 billion pesos (roughly 50.89 million dollars), adding that the United States agreed to “shoulder” the rest of the cost.
In Indonesia, one F-16 jet exploded and burst into flame duringanational defense training in 2015, leaving the pilot injured. An investigation by the military has found the cause of the accident was the antiquated engines.
Indonesia, Southeast Asia’s largest economy, procured 24 second-hand U.S.-made F-16 jets in 2011 at 750 million dollars.
Thai Air Force spokesman Prapas Sornchaidee has said that the air force has to bear the aging aircraft’s high operating and maintenance costs procured from the United States.
Vice Air Marshal Donny Ermawan Taufanto, secretary-general of the Indonesian Ministry of Defense, said that Indonesia’s Air Force relied heavily on decade-old U.S.-made F-16 jets. Besides the aging fleet, limited spare parts and munitions as well as difficulties in securing them have made problems for Indonesia.
Wilson Lee Flores,acolumnist for The Philippine Star, an English daily newspaper, described cooperation with the United States asa“vestige of past colonialism.”
“The bilateral military cooperation started in 1946 asavery unequal arrangement betweenacolonized country and its former colonizer, with American strategic, military, and other interests given more priority than the interests of the Philippines,” Flores said.
Surasit Thanadtang, former president of Thailand’s National Defense College, said that although his country has bought those U.S.-made second-hand aircraft, it has to ask for permission from the United States if it wants to improve those jets.
“It’s like we are renting the aircraft from the U.S.,” said Surasit.
“There is the source code, and the U.S. has been very tricky in sharing the source code for other new equipment to join with its systems. The U.S. can influence many countries because of this secret and its strong systems,” he told Xinhua.
Photo 1 : Photo taken on July 4, 2021 shows the crash site ofaC-130 Hercules transport plane of the Philippine Air Force in Sulu Province, the Philippines. (Joint Task Force Sulu/Handout via Xinhua)
Photo2: File photo taken on Dec. 3, 2021 shows the wreckage of an F-5 military jet in Lop Buri, Thailand. (Xinhua)
Photo3: Indonesian Air Force officials arrive at the accident site of an F-16 jet fighter at Halim Perdanakusuma Airport in Jakarta, Indonesia, April 16, 2015. (Photo by Danta K./Xinhua)